Izindaba - I-Bureau Veritas Yenza Ucwaningo Lonyaka lwe-ISO kuThongke Flow Factory
IShanghai Tongke Flow Technology Co, Ltd.yinkampani esezingeni eliphakeme egxile ku-R & D nasekukhiqizeni ukulethwa oketshezi nemikhiqizo yokonga amandla, futhi okwamanje ingumhlinzeki wezixazululo zokonga amandla zamabhizinisi. Esebenzisana neShanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co, Ltd, uTongke ungumnikazi weqembu lobuchwepheshe elinolwazi. Ngamandla amakhulu kangaka ezobuchwepheshe uTongke uqhubeka nokuphishekela izinto ezintsha futhi asethe izikhungo ezimbili zocwaningo "zokulethwa kahle koketshezi" kanye "nokulawulwa kwamandla okonga amandla kwezimoto okukhethekile" .Ngamanje uThongke usezuze ngempumelelo impumelelo eminingana yasekhaya enobuhlakani obuzimele
amalungelo empahla, anjenge- “SPH series high ufanisi self priming pump” kanye “super high voltage energy saving pump system” est. Ngasikhathi sinye uThongke wathuthukisa ubuchwepheshe bamaphampu endabuko angaphezu kweshumi afana ne-turbine mpo, ipompo lokucwilisa, end- ipompo yokudonsa nepompo ye-multistage centrifugal, ikhulisa kakhulu izinga lobuchwepheshe jikelele lolayini bomkhiqizo wendabuko.
Amafektri wonke adlulise isitifiketi se-BV esiqinisekisiwe se-ISO 9001: 2015, isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO 14001 nemikhiqizo enelungelo lobunikazi ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-20.
Ukunikezwa isitifiketi kwe-ISO 9001 kukhombisa amandla ethu efektri ukuhlangabezana njalo nokudlula okulindelwe amakhasimende. Ngalesi sizathu, abathengi abaningi badinga abahlinzeki ukuthi baqinisekiswe nge-ISO 9001 ukunciphisa ubungozi bokuthenga umkhiqizo noma insizakalo empofu. Ibhizinisi elizuza isitifiketi se-ISO 9001 lizokwazi ukuthola ukuthuthuka okuphawulekayo ekusebenzeni kahle kwenhlangano kanye nekhwalithi yomkhiqizo ngokunciphisa imfucuza namaphutha, futhi kwandise umkhiqizo.
Uhlelo lwe-ISO 9001 Management Management luyizinga elithuthukiswa kakhulu emhlabeni, nezinhlangano ezingaphezu kwesigidi eziqinisekisiwe emazweni ayi-180 emhlabeni jikelele. Yizinga kuphela emndenini wamazinga angama-9000 akhishwe yi-International Organisation for Standardization (ISO) angasetshenziswa ngenhloso yokuhlola ukuhambisana. I-ISO 9001 futhi isebenza njengesisekelo samazinga amaningi abalulekile aqondene nomkhakha othile, kufaka phakathi amadivayisi wezokwelapha e-ISO 13485), i-ISO / TS 16949 (yezimoto) ne-AS / EN 9100 (i-aerospace), kanye namazinga wohlelo lokuphatha asetshenziswa kakhulu njenge-OHSAS I-18001 ne-ISO 14001.